ပန်းတိုင်မီတာ: ရည်မှန်းချက် Tracker | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » လူနေမှုပုံစံစတဲ့ » ပန်းတိုင်မီတာ: ရည်မှန်းချက် Tracker, ငျြ့ Changer, To-Do List ကို
ပန်းတိုင်မီတာ: ရည်မှန်းချက် Tracker, ငျြ့ Changer, To-Do List ကို APK ကို
သင့်ရဲ့ပန်းတိုင်များကိုအောင်မြင်ရန်သို့မဟုတ်ပိုမြန်သင့်ရဲ့အလေ့အကျင့်ကိုပြောင်း။ သင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်သို့မဟုတ်အလေ့အထအဘို့အ To-do list ကိုဖန်တီးပါ။ သင့်ရဲ့နေ့စဉ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တိုးတက်စေူခင်း။ သင့်ရဲ့တစ်နေ့တာကိုကြိုတင်အချိန်စာရင်း။ သင့်ရဲ့ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးမြှင့်။ သင့်ရဲ့ထိရောက်မှုတိုးတက်စေူခင်း။ သင့်ရဲ့မကောင်းတဲ့အလေ့အကျင့်ကိုပြောင်းနှင့်အသစ်ကောင်းသောအလေ့အထများကိုဖန်တီးပါ။
ဤရွေ့ကားသင်သည်ပန်းတိုင်နှင့်အလေ့အထပြောင်းလဲဘို့ရည်မှန်းချက်မီတာနှင့်အတူ, သင့် To-Do List ကိုအဘယ်သို့ပြုနိုင်သည်ဖြစ်ကြသည်။
★အကောင်းဆုံးအသုံးပြုသူ-ဖော်ရွေရည်မှန်းချက် tracker နှင့်အလေ့အထ changer app ကို
★လှပသောဒီဇိုင်း: ပန်းတိုင်မီတာကစျေးကွက်အပေါ်အများဆုံးလှလှပပဒီဇိုင်း app များအနက်အောင်, ရယ်စရာကာတွန်းဇာတ်ကောင်များ၏တန်ချိန်နှင့်အတူလှပသောဒီဇိုင်းမှာ warped ဖြစ်ပါတယ်။
★အချိန်စီမံခန့်ခွဲမှု: လျော့နည်းအချိန်မှာပိုလုပ်ဖို့လိုသူမည်သူမဆိုများအတွက်သင့်လျော်သော, နေ့စဉ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များနှင့်အလေ့အထများသို့ဆင်း Broken ။ ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်မှုနှင့်အလေ့အထခြေရာခံခြင်းတိုးမြှင့်ဖို့ထိရောက်ရည်မှန်းချက်ခြေရာခံခြင်းစနစ်။
★နေ့စဉ်သို့မဟုတ်အပတ်စဉ်ပုံမှန်အချိန်ဇယားအစီအစဉျ: သင်နေ့စဉ်သို့မဟုတ်အပတ်စဉ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်သို့သင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်သို့မဟုတ်အလေ့အထထားနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျထိထိရောက်ရောက်သင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်သို့မဟုတ်အလေ့အထတိုးတက်မှုကိုခြေရာခံဖို့ရန်-Do List ကိုဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။
★ပန်းတိုင် / ကျင့်စာရင်းဇယားလေ့လာဆန်းစစ်: သင့်ရဲ့ပန်းတိုင်များကို Set သူတို့ကိုတိုင်းနှင့်သင့်တိုးတက်မှုကိုအကြောင်းကိုစာရင်းဇယားကိုကြည့်ပါ။ ရေတိုရေရှည်နှင့်ရေရှည်ရည်မှန်းချက်များသို့မဟုတ်အလေ့အထအကောင်းဆုံးရည်မှန်းချက်စီမံခြင်းနှင့်အောင်မြင်မှုစနစ်က
★အော်တို Backup ကိုနှင့် Sync: သင့်ဒေတာကိုအလိုအလျှောက်ထကျောထောက်နောက်ခံနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆာဗာများနှင့်အတူညှိနေသည်။
★ပန်းတိုင် / အလေ့အထတင်းပလိတ်များ: ပန်းတိုင်မီတာကောက်ဖို့အဆင်သင့်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်နှင့်အလေ့အထများတန်ချိန်နှင့်အတူကြွလာ
ခက်လေ့လာမှုတစ်ခုစာမေးပွဲတွင်အဘို့ ပြင်ဆင်. , စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုဖတ်ရှု
အထွေထွေလေ့ကျင့်ခန်း, န့ ်. , Running, လမ်းလျှောက်, စက်ဘီးစီးရေကူး, ယောဂ, တောင်တက်ခြင်း, ကခုန်, ဘောလုံး, ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ, နှင်းလျှောစီး
နံနက်စာမ Fast Food အစာစား, ကိုယ်အလေးချိန်ပိုမိုသစ်သီးများ & ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကိုစားငါးကိုစား
အလုပ်ခက်, အကြှနျုပျ၏နေ့ဆွဲ, ကွန်ယက်အဖွဲ့, တစ်ဦးက New ယောဘသည်အဘို့အ Apply, အလုပ်မှာသင့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်, Stay အာရုံစိုက် Organize
ကနျြးမာရေးဆေး, သွားဘက်ဆိုင်ရာဆေး, Meditate, လုံလောက်အိပ်စက်ခြင်းကိုရယူလိုက်ပါ, နေ့လည်စာလူငယ်များသို့, အားလပ်ရက်အပေါ် Go
ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကိုရပ်တန့်, Stop မူးယစ်ဆေးစွဲလွန်းတီဗွီကြည့်ရပ်တန့်မူးယစ်ဆေးဝါး overusing ရပ်တန့်,
ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်ငွေ, အကြွေးထဲက Get, Credit Card ကိုချွတ် Pay, ကျောင်းသားချေးငွေများကိုချွတ် Pay, အရေးပေါ်ရန်ပုံငွေအဖွဲ့, သင်ရယူနိုင်သောထက်လျော့နည်းအပေါ်တိုက်ရိုက်
သငျသညျ, တစ်ဦးမှလုပျစာရင်းအဖြစ်နေ့စဉ်တာဝန်သတိပေးချက်, ကျောင်းသားပြက္ခဒိန်, အချိန်ဇယားစီမံ, လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အချိန်ဇယားစည်းရုံးရေးမှူး, ကုန်ထုတ်စွမ်းအားအလေ့အထ tool ကိုနေ့စဉ်အချိန်မန်နေဂျာသို့မဟုတ်နေ့စဉ်စီမံပန်းတိုင်မီတာကိုသုံးနိုင်သည်။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ပြက္ခဒိန်ဇယားရှုပ်ပွနေအောင်မထားဘူးအဖြစ်ကြောင့်, လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်လုပ်ငန်းများကိုတစ်ပြက္ခဒိန်ထက်ပိုမိုအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ပန်းတိုင်မီတာသင်တို့အဘို့အားကောင်းတဲ့ကုန်ထုတ်စွမ်းအား tool ကိုဖွစျခငျြ, ဒါကြောင့်သင်ကမကြိုက်ဘူးဆိုရင် add ချင်ပါတယ်ဘာကိုကျွန်ုပ်တို့အားပြောပြရန်တွန့်ဆုတ်ကြဘူး။
သင်တစ်ဦး bug ကိုသို့မဟုတ်ပြဿနာကိုတွေ့လျှင်, ကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်က (goalmeter@gmail.com) ပေးပို့နိုင်ပါသည်, ငါတို့သည်သင်တို့၏ရှိစေခြင်းငှါမဆိုပြဿနာများကိုဖြေရှင်းပါလိမ့်မယ်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ကိုသင့်ရဲ့ပြဿနာအီးမေးလ်ပို့ခြင်းမပြုမီမကောင်းတဲ့မှတ်ချက်စွန့်ခွာကြဘူးပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
ပန်းတိုင်မီတာနေဆဲလူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးဤအကြောင်းအဘို့သင့်ထောက်ခံမှုအလွန်အရေးပါသည်။ သင်ကမကြိုက်ဘူးနှင့်ကကြီးမြတ်အလားအလာရှိပါတယ်ထင်ကိုကောင်းတဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်ပေးပါဆိုပါကယ့်ကိုကူညီပေးသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! ဒါပေမယ့်သင်အမှန်တကယ်မကျင့်လျှင်, အကယ့်ကိုတိုးတက်စေရန်အလို့ငှာသိလို, သငျသညျကိုပြောင်းလဲချင်ပါတယ်ဘာကိုကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပေးပါ။ အတော်များများကအများကြီးကျေးဇူးတင်စကား!
ဖေဖော်ဝါရီလ 01 2018 - fixed အများအပြား bug တွေ။
ဇန်နဝါရီလ 29 2018 - Optimized ကုဒ်။
ဇန်နဝါရီလ 23 2018 - fixed အများအပြား bug တွေ။
ဇန်နဝါရီလ 20 2018 - fixed အများအပြား bug တွေ။ fixed က Android 8.0 bug တွေ။
ဇန်နဝါရီလ 15 2018 - To-do list ကိုတိုးတက်လာသည်။
ဇန်နဝါရီလ 11 2018 - fixed Widget လေး bug ကို။
ဇန်နဝါရီလ 10 2018 - Task ကိုပြင်ဆင်ရန် / ဖျက်မှုအင်္ဂါရပ်ကဆက်ပြောသည်။ အခြားတိုးတက်မှုများ။
ပန်းတိုင်မီတာ: ရည်မှန်းချက် Tracker, ငျြ့ Changer, To-Do List ကို
19.85 ကို MB